Ukhukhamba kashukela - umkhiqizo jikelele > Ukudla ngesifo sikashukela
Thayipha 2 isifo sikashukela: inkomba ye-glycemic yomkhiqizo
Wonke umuntu uyazi ukuthi imifino yazo zonke izinhlobo iyasiza empilweni, kepha ukhukhamba onesifo sikashukela, ukukhuluphala kanye nesifo senhliziyo kufanele ukunakwa okukhethekile.
Kunconywa ukuthi ukhuluphele kanye ngeviki enze usuku lokwethula “ikhukhamba,” kepha ukwelashwa kwesifo sikashukela ngamakhukhamba okwamanje ngeke kuthathwe ngokungathi sína ngalo lonke usizo olungenamibandela lokudla lesi sitshalo semifino.
Ake siqale ngokuhle. Kepha okokuqala, emugqeni owodwa owodwa, kufanelekile ukukhumbula ukuthi ngohlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela, amaseli we-beta akhiqiza i-insulin ama-pancreas aqothulwe ngokukhetha, kanye nokuhluka kwesifo sikashukela sohlobo 2 (ezimweni ezingama-90% lapho iziguli zinokukhuluphala kakhulu) ukuthi izinga eliphakeme ushukela uhlotshaniswa nokuphikisana ne-insulin kanye nokwephulwa okuhlobene nokuqothuka kwayo.
Ukudla kwe-caloric nsuku zonke kwabanesifo sikashukela akufanele kube ngaphezulu kwe-kcal eyizinkulungwane ezimbili, ngakho-ke ukusebenzisa ukhukhamba omusha wesifo sikashukela kulula kakhulu ukulandela lesi sincomo, ngoba ama-98% wamakhukhamba enziwe ngamanzi, futhi i-100 g ngayinye inika kuphela i-16 kcal. Lokhu kusho ukuthi zingadliwa ngamanani amakhulu ngaphandle kwengozi yokwanda okubukhali kokudla kwama-khalori.
Kuyo ikhukhamba efanayo eyi-100 g, okuqukethwe ama-carbohydrate ahilelekile ku-hyperglycemia akwedluli ku-3.6-3.8 g, kanye ne-akhawunti ye-glucose ne-fructose engadluli kuma-2-2,5%.
Futhi uma kwabanye abangabazayo le datha ingaphendulanga umbuzo wokuthi kungenzeka yini ukuthi udle ukhukhamba wohlobo 1 no-2 lwesifo sikashukela, kusalokhu kushiwo enye impikiswano, ekhombisa inkomba ye-glycemic yamakhukhamba - 15, ongaphansi kuka-apula kunalowo wama-apula, futhi ingxenye enkulu yamatamatisi, nayo eyemikhiqizo enenkomba ephansi ye-glycemic.
Eqinisweni, ukhukhamba (i-Cucumis sativus yomndeni weCucurbitaceae - ithanga) banezinye izinzuzo, ngokwesibonelo, ziqukethe ama-macro- kanye nama-micronutrients adingwa ngumzimba: i-sodium (kuze kufike ku-7 mg nge-100 g), i-magnesium (10-14 mg), i-calcium (18- 23 mg), phosphorus (38-42 mg), potassium (140-150 mg), iron (0.3-0.5 mg), cobalt (1 mg), manganese (180 mcg), ithusi (100 mcg), chromium (6 μg), molybdenum (1 mg), zinc (kuze kufike ku-0,25 mg).
Kunamavithamini kumakhukhamba, ngakho-ke, kumagremu ayi-100 emifino emisha, ngokusho kweMphilo Yezempilo Yomhlaba, iqukethe:
0.02-0.06 mg beta-carotene (provitamin A),
I-2.8 mg ye-ascorbic acid (L-dehydroascorbate - uvithamini C),
I-0.1 mg ye-tocopherol (uvithamini E),
7 mcg folic acid (B9),
I-0.07 mg ye-pyridoxine (B6),
I-0.9 mg biotin (B7),
I-0.098 mg nicotinamide noma niacin (B3 noma PP),
mayelana ne-0,3 mg pantothenic acid (B5),
0.033 mg riboflavin (B2),
0.027 mg thiamine (B1),
kufika kuma-17 mcg phylloquinones (uvithamini K1 no-K2).
IVithamini C kwisifo sikashukela ayisebenzi njenge-antioxidant kuphela, kepha futhi inciphisa nengozi yokwakheka kwe-atherosulinotic plaque kanye nomonakalo wamasipha, futhi iyasiza ekwelapheni amanxeba.
Kwavela ukuthi: i-nicotinamide ivikela amaseli we-pancreatic beta kusuka ekubhujisweni kwe-autoimmune futhi ingavimbela ukuthuthukiswa kwe-nephropathy, futhi ama-phylloquinones angathinta kahle ukubikwa kwe-peptide hormone (i-GLP-1) - i-glucagon-like peptide-1, okulawulwa ngokomzimba kokudla futhi okubandakanyeka kuyo. glucose metabolism kusuka ekudleni.
Ochwepheshe bahlobanisa isimo sokuzivikela komzimba kanye nokuhlanganiswa kwamaprotheni nge-zinc, kanye nomsebenzi we-insulin, ne-zinc, kanye nokusabela okwanele kwama-cell receptors aleli hormone ne chromium. Futhi i-potassium ne-magnesium kumakhukhamba zisiza ukwehlisa umfutho wegazi futhi ziqinisekise ukuqina kokuqothuka kwemisipha yenhliziyo.
Ukuba ngumthombo we-fiber, ukhukhamba omusha wesifo sikashukela kusiza ekwandiseni inqubo yokugaya, asuse ubuthi emathunjini futhi kunciphise inani lekholesterol embi. Ngaphezu kwalokho, njengoba ochwepheshe e-American Diabetes Association inothi, isitshalo semifino esivela emifino emisha sinciphisa ukumuncwa kwama-carbohydrate noshukela.
Ukhukhamba - ikhambi lesifo sikashukela?
Ukwakheka kwe-biochemical ikhukhamba namandla ezakhiwo zayo ezizuzisayo ezigulini ezinesifo sikashukela kuyaqhubeka kufundwa. Izifundo zezilwane (imiphumela yazo eyashicilelwa ngonyaka ka-2011 kwi-Iranian Journal of Basic Medical Science kanye nango-2014 ku-Journal of Medicinal Plant Research) ikhombisile ikhono lokukhipha imbewu kanye uginindela wekhukhamba ukunciphisa ushukela wegazi (kumagundane).
Kwenziwa izifundo ekhasini lezikhukhamba ezaziphiwe amagundane onesifo sikashukela sohlobo 2. Lokhu kuhlola kuholele ekuqopheni komphumela ovuselelayo we-triterpene compounds ye-cucurbites (i-ccinurbitans noma i-cucurbitacins) equkethe amakhasi we-ikhukhamba, akhuthaza ukukhishwa kwe-insulin kanye nokulawulwa kwe-hepatic glucagon metabolism.
E-China, lezi zihlanganisi zikhishwa esihlotsheni esiseduze kakhulu sekhukhamba - ithanga elijwayelekile le-Cucurbita ficifolia. Njengoba kubikiwe kwi-Journal of the Science of Food and Agriculture, ukusetshenziswa kwalokhu okukhishwa kumagundane okugcwala onesifo sikashukela kuveze umphumela we-hypoglycemic, kanye nomthelela wokuphinda wenzakale kumaseli we-beta owonakele.
Kungaba nzima ukulawula isifo sikashukela, futhi amakhambi amaningi emvelo angaba usizo kubantu abanalesi sifo se-endocrine. Vele, akekho owelapha isifo sikashukela ngamakhukhamba, futhi ukhukhamba akulona ikhambi lesifo sikashukela. Kepha imiphumela yocwaningo kuma-rodents ikhombisa ukuthi ucwaningo olwengeziwe luyadingeka ukuthola ukuthi ukhukhamba lungaluthinta kanjani ushukela wegazi kubantu.
Okukhulu kunakho konke kumakhukhamba e-potassium, okuchaza umphumela wabo wokugaya. Iziguli ezinesifo sikashukela ezinenkinga yezinso zinqunywa ukuthi zidliwe i-nephropathy yesifo sikashukela, futhi uma kwenzeka ukungalingani kwe-electrolyte (okhula ngenxa yokwehluleka ukusebenza kwezinhlungu okwenzeka ezinsini), izazi zezempilo zibeka umkhawulo ekuphuzeni usawoti. Izindlela zokuphikisana nokudla kweziguli ezine-osmotic diureis ne-hyperkalemia kushukela, kanye nasezimweni zokulimazeka kwezinso kanye / noma i-bladder, kufaka phakathi ukuvinjwa kwamazambane, izithelo zezithelo zomdumo, ama-apricots (kanye nama-apricots omisiwe), ubhanana kanye namakhukhamba aqukethe i-potassium eningi.
Umphumela we-choleretic yamakhukhamba ubangela ukungabandakanywa kwabo ekudleni kwe-cholecystitis kanye nesifo se-gallstone, lokhu imifino kubekiwe ngezinqubo zokuvuvukala esiswini kanye ne-duodenum (gastritis, ulcer), kanye nasesiswini esikhulu (colitis, isifo sikaCrohn).
Amakhukhamba Ahlanganisiwe, Athethwe ngamehlo, anosawoti kanye nochopho wesifo sikashukela
Buza noma yikuphi ukudla okudlayo, futhi uzokuqinisekisa ukuthi ngesifo sikashukela udinga ukwenqaba ukudla okubabayo nokunosawoti, njengoba kukhulisa isifiso sokudla futhi kusebenze ukugcinwa kwejusi lesisu, imfihlo ye-bile ne-overexert yamanyikwe. Okusho ukuthi, ukhukhamba ongabilisiwe wesifo sikashukela, kanye namakhukhamba angenasawoti, anosawoti futhi afakwe emanzini anoshukela kubhekwa njengemikhiqizo engafanele. Ngaphezu kwalokho, endaweni ene-acidic, kuze kufike ku-25-30% wamavithamini B1, B5, B6, B9, A no-C abhujiswa, kuthi ngemuva kwezinyanga eziyi-12 zokugcinwa, lokhu kulahleka kuphindwe kabili, yize lokhu kungathinti ukunambitheka. Usawoti awukhulisi ivithamini C, kepha lapho wenza ukhukhamba ukhukhamba, wenza izinga lokushisa eliphakeme.
Imifino ethosiwe yeshukela ayivinjelwe ngokuphelele, ngakho-ke kwesinye isikhathi ungadla utamatisi noma ukhukhamba. Kepha uma womisa umlomo njalo womile (okubonisa ukuntuleka kwamanzi emzimbeni ohambisana ne-hyperglycemia), kanye nomfutho wegazi ophakeme, khona-ke imifino ekheniwe enosawoti omningi kufanele ingafakwa kwimenyu yakho.
Ungawaguqula kanjani ukhukhamba onesifo sikashukela?
Ukhukhamba ungathathelwa indawo yemifino enenkomba efanayo ephansi ye-glycemic, equkethe nezinto eziningi ezilusizo namavithamini, kanye ne-fiber, okunomthelela ekutholeni kancane kancane ama-carbohydrate. Lezi iklabishi, iklabishi entsha nesikhethiwe, amahlumela iBrussels ne-broccoli, utamatisi kanye nopelepele wensimbi, i-zucchini ne-isitshalo seqanda, ulethisi nesipinashi.
Inkomba ye-glycemic yama-ukhukhamba notamatisi
Ukulandela ukudla okunesifo sikashukela, kuzofanele ukhethe ukudla neziphuzo ezinezinkomba ezingama-50. Yidla ukudla ngaleli nani ngaphandle kokwesaba, ngoba ukugcwala kweglucose egazini kuzohlala kungashintshiwe, futhi ngeke kukhuphuke.
Imifino eminingi ine-GI ngaphansi kwemikhawulo eyamukelekayo. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi eminye yemifino iyakwazi ukukhuphula inani layo, kuya ngokwelashwa okushisa. Ukuhluka okunjalo kufaka izaqathe kanye nama-beet, uma kubilisiwe, akuvunyelwe kubantu abanezifo ze-endocrine, kepha ngesimo esingavuthiwe bangadliwa ngaphandle kokwesaba.
Kwakhelwe itafula labanesifo sikashukela, lapho kubhalwe khona uhlu lwemikhiqizo yezitshalo nezilwane, kukhombisa i-GI. Kukhona futhi izinhlobo zokudla neziphuzo ezine-GI yama-zero amayunithi. Inani elikhangayo kangako ekuboneni kokuqala lingadukisa iziguli. Imvamisa, inkomba ye-glycemic ye-zero ihlala ekudleni okuphezulu kwama-kilojoule futhi kugcwele i-cholesterol embi, okuyingozi kakhulu kuzo zonke iziguli ezinesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo (okokuqala, kwesibili nokuthinta umzimba).
Izinga Lokwehlukanisa Index:
Amayunithi angu-0 - 50 - inkomba ephansi, lokho kudla neziphuzo kuyisisekelo sokudla kwesifo sikashukela,
Amayunithi angama-50 - 69 - okumaphakathi, imikhiqizo enjalo ivunyelwe etafuleni njengokuhlukile, kungabi ngaphezu kokuphindwe kabili ngesonto,
Amayunithi angama-70 nangaphezulu - ukudla neziphuzo ezinezinkomba ezinjalo kuyingozi enkulu, ngoba kuvusa ukugxuma okubukhali ekugxilweni kwe-glucose egazini futhi kungadala ukonakala enhlalakahleni yesiguli.
Ukhukhamba nosawoti notha kungathiwe ngeke kuguqulwe i-GI yabo ukube ibingahlotshwe ngaphandle koshukela. Le mifino inencazelo elandelayo:
ikhukhamba ine-GI yamayunithi ayi-15, inani le-calorific ngamagremu ayi-100 womkhiqizo lingu-15 kcal, inani lamayunithi esinkwa lingu-0.17 XE,
inkomba ye-glycemic of utamatisi izoba amayunithi ayi-10, inani lekhalori ngegremu eziyikhulu zomkhiqizo lingama-20 kcal, futhi inani lamayunithi esinkwa angama-0,33 XE.
Ngokususelwa kuzinkomba ezingenhla, singaphetha ngokuthi ukhukhamba nosawoti notshwayo kungafakwa ngokuphephile ekudleni kwanshukela kwansuku zonke.
Imikhiqizo enjalo ngeke ilimaze umzimba.
Izinzuzo zamakhukhamba abanzi
Ukhukhamba oluhlanganisiwe, njengotamatisi, imifino ethandwa kakhulu, hhayi ngesifo “esimnandi” kuphela, kodwa futhi nokudla okuhlose ukunciphisa isisindo. Kuyadingeka kuphela ukuthi ubheke ukuthi lezi zinhlobo zemifino azikwazi ukudliwa yiwo wonke umuntu - akunconywa abesifazane abakhulelwe, nabantu abahlushwa i-edema.
Ukhukhamba sikashukela luyasiza ngoba aqukethe imicu eminingi. Kuvimbela ukuthuthukiswa kwe-neoplasms enobungozi, kunomthelela omuhle ekusebenzeni kwamapheshana emathunjini, kuvimbela ukuqunjelwa futhi kususe ubuthi emzimbeni.
Ngenqubo yokuvuthwa, kukhiqizwa i-lactic acid emakhukhamba. Futhi, inomphumela olimazayo kumagciwane we-pathogenic emgodini wesisu, futhi ibuye ijwayele nomfutho wegazi, ngenxa yokuhamba kwegazi okuthuthukile.
Ngakho-ke, izinto ezibalulekile ezilandelayo zitholakala kukhukhamba:
Ama-antioxidants afakiwe ekwakhiweni anciphisa inqubo yokuguga yomzimba, asuse izinto eziyingozi nezinhlanganisela kuwo. Okuqukethwe okuphezulu kwe-Vitamin C kuqinisa amasosha omzimba, kwandise ukumelana nomzimba kuma-bacteria kanye nokutheleleka kwe-etiologies ehlukahlukene. IVitamin E iqinisa izinwele nezinzipho.
Uma udla ukhukhamba nsuku zonke, lapho-ke uzosusa ngokuphelele ukuntuleka kwe-iodine, okudingeka kakhulu kunoma yiziphi izifo ezihambisana nohlelo lwe-endocrine.
Ukwakheka okuhle kwamakhukhamba, lapho amaminerali ehlanganiswa khona kahle, kuvumela ukuthi amuntshwe kahle. Isibonelo esithusayo salokhu i-magnesium ne-potassium, eziba nomthelela omuhle ekusebenzeni kohlelo lwezinhliziyo nolwezinzwa.
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, ukhukhamba wohlobo 2 no-1 sikashukela kunezinzuzo ezilandelayo emzimbeni:
ngisho nangemva kokuthola ukwelashwa okushisa, le mifino igcina inani elikhulu lamavithamini kanye namaminerali,
ukusebenza kahle kuthuthukisa isifiso sokudla,
unomphumela onenzuzo ohlelweni lokugaya ukudla,
hlanganisa ubuthi botshwala emzimbeni,
ngenxa yokuqunjelwa kwe-fiber inhibit.
Kodwa kufanele unake amaphuzu athile amabi kusukela ekusebenziseni ukhukhamba. Zingenzeka kuphela uma kudliwe ngokweqile:
i-acetic acid inomphumela olimazayo koqweqwe lwawo lwamazinyo,
ukhukhamba alinconywa ezifweni zezinso nezinso,
ngenxa yokuthanda kwabo okhethekile, bangakhulisa inkanuko, okuyinto engathandeki kakhulu kubantu abanesisindo somzimba ngokweqile.
Ngokuvamile, ukhukhamba kufanelekile njengomkhiqizo wokudla ogunyaziwe. Bavunyelwe ukudla nsuku zonke, ngesilinganiso esingeqi kuma-gramu ayi-300.
Ukudla kwesidlo sikashukela
Ukhukhamba kungenye yezithako ezejwayelekile kumasaladi. Bangezelelwa nezifundo zokuqala, ezinjenge-hodgepodge. Uma inkambo yokuqala ihanjiswa ngama-apula, kungakuhle ukuyipheka emanzini noma umhluzi wesibili ongenawo amafutha, ngaphandle kokuthosa.
Iresiphi elula kakhulu yesaladi, esetshenziselwa ukwengeza esitsheni sesibili, ilungiselelwe nje kalula. Kuyadingeka ukuthatha ukhukhamba ambalwa bese uwasika emasongweni ayisigamu, uthathe kahle u-anyanisi oluhlaza. Faka ama-champignon aqotshwe noma athosiwe, asikwe izingcezu, amanye amakhowe avumelekile. Faka isaladi ngamafutha omnqumo bese ufafaza nopelepele omnyama.
Ungesabi ukusebenzisa amakhowe kule iresiphi. Zonke zinenkomba ephansi, imvamisa engeqi emayunithi angama-35. Ukuze uthole i-refueling, ungathatha hhayi nje i-olive lama-olive ajwayelekile, kepha ne-oyili efakwe namakhambi akho owathandayo. Ukuze wenze lokhu, amakhambi omisiwe, ugalikhi kanye nopelepele obabayo afakwa esitsheni sengilazi enamafutha, futhi konke kufakwa okungenani amahora angama-24 endaweni emnyama futhi epholile. Ukugqoka okunjalo kwamafutha kuzongeza ukunambitheka okuhlukile kunoma iziphi izitsha.
Ngamakhekhe, ungapheka isaladi eyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ezohlobisa noma yiliphi itafula leholide. Vele ukhumbule umthetho owodwa obalulekile wokupheka amasaladi ngamapula - adinga ukufakwa okungenani amahora ambalwa esiqandisini.
Isitsha esinjalo siyohlobisa imenyu yemikhosi yabanesifo sikashukela futhi sikhange kunoma yisiphi isivakashi.
Izithako ezilandelayo ziyadingeka kwi-Caprice isaladi:
ukhukhamba ezimbili eziqokiwe
ama-champion amasha - amagremu angama-350,
ushizi onamafutha amancane - amagremu ayi-200,
isixha semifino (dill, iparsley),
isipuni samafutha emifino acwengekile,
ukhilimu onokuqukethwe okunamafutha okungu-15% - ama-milliliters,
wezipuni ezintathu zesinaphi,
wezipuni ezintathu zika-ukhilimu omuncu ophansi.
Sika u-anyanisi ube ama-cubes amancane bese ubeka epanini, ubilise ukushisa okuphakathi, uvuse ngokuqhubekayo imizuzu emithathu. Ngemuva kokuthela amakhowe uthathe izingcezu, usawoti kanye nopelepele, hlanganisa bese ubila imizuzu eyi-10 - 15, kuze kube yilapho amakhowe esemi ngomumo. Dlulisa imifino endishini yesaladi. Faka imifino eqoshiwe, ukhilimu, lwesinaphi no-ukhilimu omuncu, kanye namakhukhamba e-julienne.
Hlanganisa konke kahle. Hlanganisa ushizi bese ufafaza isaladi kuso. Faka indishi esiqandisini okungenani amahora amathathu. Izinga lansuku zonke le-Caprice isaladi lesifo sikashukela akufanele lidlule amagremu angama-250.
Ukuncoma okujwayelekile kokudla
Njengoba kuchaziwe ngaphambili, ukudla neziphuzo zabashukela kufanele kube ne-index ephansi nokuqukethwe okuphansi kwekhalori. Kepha hhayi lokhu kuphela okuyingxenye yokwelashwa kokudla. Kubalulekile ukugcina zona kanye izimiso zokudla kokudla.
Ngakho-ke, ukudla kufanele kuhlukahluka ukuze kugculise umzimba ngamavithamini namaminerali ahlukahlukene nsuku zonke. Kufanele udle okungenani amahlandla ayisihlanu ngosuku, kepha ungabi ngaphezu kweziyisithupha, mhlawumbe ngezikhathi ezithile.
Ekuseni, kungcono kakhulu ukudla izithelo, kepha ukudla kokugcina kufanele kube lula. Inketho efanelekile kungaba ingilazi yanoma yimuphi umkhiqizo ongabisi onobisi omuncu (i-kefir, ubisi olubilisiwe olubunjiwe, iyogathi) noma ushizi wekhokho omncane.
Ukulandela imigomo yokudla okungenamsoco ku-mellitus yesifo sikashukela, isiguli sizokwazi ukulawula ukugcwala kwe-glucose yabo ngaphandle kwezidakamizwa nemijovo.
Ividiyo ekulesi sihloko ikhuluma ngezinzuzo zikapula.
Ngokuya kokudla okuningi okwenzelwe ukunciphisa isisindo somzimba, kunconyelwa ukufaka ukhukhamba ocebile nge-fiber ekudleni, kepha ama-ukhukhamba, ngakho-ke yonke into iyamangaza. Ingxenye inomphumela omuhle emgodini wokugaya ukudla, ukuvimbela ukuqunjelwa. Kuyasiza nokususa ubuthi kahle, kodwa ngenxa yokuqukethwe usawoti okuphezulu kungadala ukugcinwa kwamanzi emzimbeni.
Kepha makube njengoba kungenzeka, ukhukhamba ucebile ezintweni ezibalulekile:
Ukwakhiwa kwamakhukhamba kuqukethe ama-antioxidants, ngenxa yokuthi inqubo yokuguga yomzimba yehlisa ijubane - ubuthi nezinye izinto eziyingozi ziyaqedwa. IVitamin C iqinisekisa ukuqina kokungazinzi kanye nokulwa okusebenzayo kwamagciwane kanye nokutheleleka. IVitamin E isiza ukuqinisa izipikili nezinwele.
Ukudla njalo imifino enosawoti kuzokwenzela ukuntuleka kwe-iodine. Lesi yisinkomba esibaluleke kakhulu lapho imisebenzi yokuvikela yohlelo lwe-endocrine inyuka khona.
Ukwakheka okuyingqayizivele komkhiqizo, okuhlanganisa amaminerali, kunomthelela ekungenisweni kwawo okungcono. I-Magnesium ne-potassium kunomthelela omuhle emsebenzini wesistimu yenhliziyo neyezinzwa.
Umphumela womkhiqizo emzimbeni:
ngisho nangemva kokulashwa okushisa, ukhukhamba ucebile ngamaminerali namavithamini,
ubuthi botshwala emzimbeni bungathathi hlangothi.
Ukhukhamba (oqoshiwe) yimikhiqizo enomphumela omuhle ohlelweni lokugaya ukudla.
Ukhukhamba angahlosiwe inemiphumela eyengeziwe ezuzisayo, kufaka phakathi ukuqina kwe-carbohydrate metabolism emzimbeni, ukwenziwa lula kanye nokusebenza ngokwejwayelekile komsebenzi we-pancreatic.
Kubalulekile ukunaka ukuthi kuvunyelwe ukudla ukhukhamba, kepha ngamanani amancane. Ngaphezu kwalokho, kwesinye isikhathi kufanele uhlele izinsuku zokuzila, lapho udinga ukudla khona ukhukhamba omusha kuphela. Kulokhu, kuvunyelwe ukudla cishe amakhilogremu amabili wamakhukhamba ngosuku. Lapho ulayisha phansi, kubalulekile ukukhipha umsebenzi wokuzivocavoca.
Akufanele usebenzise umkhiqizo uma ushukela ungeziwe ku-marinade. Esikhundleni sikashukela, kungcono ukwengeza i-sorbitol ku-marinade.
Isibalo sokudla singama-5-6 ngosuku. Qiniseka ukuthi ugcina ukhukhamba esiqandisini noma endaweni epholile lapho ilanga lingangeni. Uma udinga ukwelula impilo yeshelufu lomkhiqizo, ungamisa amakhukhamba. Inhlanganisela yamakhukhamba neklabishi noma eminye imifino izoba wusizo.
Kuyadingeka futhi ukulandela eminye imithetho yokudla ukhukhamba. Isibonelo, akufanele uwahlanganise nokudla okusindayo, ngoba lokhu kungathinta kabi izinqubo zokugaya emzimbeni.
Ungawadli ukhukhamba owenziwe ngamakhowe ngamakhowe. Ku-mellitus yesifo sikashukela, ukusetshenziswa kwamakhowe kufanele kube ngamanani amancane, futhi ukuhlangana kwawo neminye imikhiqizo kungalimaza umzimba, ngenxa yokuthi isiguli sinesistimu yokugaya ukudla ebuthaka kakhulu.
Kunezincomo eziphathelene nomthamo. I-Endocrinologists incoma ukungadli ukhukhamba ongaphezulu kuka-3 ngosuku. Ngasikhathi sinye, azikwazi ukudliwa ngasikhathi sinye, kepha kuyadingeka ukusabalalisa leyo ngxenye ngokulinganayo. Ukwenza isibonelo, yidla ikhukhamba elilodwa lesidlo sasekuseni, isidlo sasemini kanye nesidlo sakusihlwa.
Indlela ethandwa kakhulu yokupheka isaladi yamakhukhamba isengezo esihle esitsheni sesibili. Ukulungiselela isaladi kulula kakhulu, futhi kudinga umzamo omncane.
Halve 2 ukhukhamba ophakathi.
Chopha iqembu elincane lika-anyanisi oluhlaza bese ufaka isaladi.
Fry ama-champignons aqoshiwe ngenani elincane lamafutha zemifino.
Faka ingcosana kasawoti.
Ekupheleni kokupheka, udinga ukufaka isitsha nge-1 isipuni samafutha omnqumo.
Kukhona enye iresiphi yokwenza amasaladi usebenzisa ukhukhamba. Isitsha esinjalo siyohlobisa itafula lomkhosi. Kodwa ubunzima obukhulu balesi saladi ukuthi ngaphambi kokuwusebenzisa kufanele ugcizelele amahora amaningi esiqandisini.
Sika u-anyanisi ongu-1 ku-cubes amancane bese ubeka epanini imizuzu emithathu. Ngesikhathi esifanayo, gqugquzela njalo.
Sika i-350 g yamakhowe we-porcini, engeza usawoti kanye nopelepele. Imizuzu kuze kuphekwe imizuzu engaba ngu-15.
Ngemuva kokubeka zonke izithako endishini yesaladi.
Faka ukhukhamba 2 oqoshiwe.
Fafaza ngamakhambi asikiwe.
Isizini 60 g yesinaphi, 60 g kokhilimu omuncu 10%, 40 ml kokhilimu 15%.
Govuza bese ufafaza isaladi nge ushizi owenziwe kanzima (200 g).
Isiqandisi amahora amathathu.
Isifo sikashukela isaladi elinjalo lingadliwa ekuseni. Ukusebenza kwesisindo akufanele kudlule ku-250 g.